Sawir dhibco, xariiqyo iyo qoraallo ka soo gudbaya Excel illaa AutoCAD - Geofumadas
Abriil, 2019 AutoCAD-AutoDesk, dhowr
Waxaan hayaa liiskan iskuduwaha ee 'Excel'. Kuwaas waxaa ka jira isku-duwidda X, isku-duwidda Y, iyo sidoo kale magac loogu talagalay cirifka. Waxa aan rabo waa inaan ku sawiro AutoCAD. Xaaladdan oo kale waxaan u isticmaali doonnaa fulinta qoraallada qoraalka isku duuban ee Excel.
Ku xallin amar ku saabsan galinta dhibcaha ee AutoCAD
Jadwalka lagu muujiyey garaafka, sida aad u arki karto, waxaa ku jira santuuqa leh magaca vertex, ka dibna UTM ayaa isku duwaya iskeelooyinka X, Y.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa isku dubbaridka iskuduwaha sida amarka AutoCAD uu ka filayo iyaga. Tusaale ahaan, si aan u soo qaadanno dhibic waxaan qabsan doonnaa: isku xidhka 'POINT coordinateX, coordinateY.
Sidaa daraadeed, waxa aan sameyneyno waxay galinayaan tiir cusub oo leh xogtan la isku daray, qaabka:
Si aan u sameyno isku-dhafkan waxaan sameeyay waxyaabahan soo socda:
Waxaan ugu yeeray D4 unug magaca 'POINT'
Waxaan ku abuurey hawsha wadajirka ah, xarig ay kujiraan unugga 'POINT cell', kadib waxaan ka tegey meel banaan anigoo isticmaalaya »«, kadib waxaan heystaa unugga B5 oo leh laba lambar wareeg ah, ka dib si aan u soo jiito comma aan isticmaalay «,», ka dib waan haystaa unug isku xiran C5. Kadib waxaan soo guuriyay safafka intiisa kale.
Ku sawir dhibcaha Excel
Waxaan ku soo koobay waxyaabaha ku jira qaybta D ee qoraalka.
Si aad u socodsiiso, ku qor SCRIPT qaybta amarka, ka dibna furaha Enter. Taasi waxay keeneysaa sahmiyaha waxaanan raadiyaa feylkii aan wacay geofumadas.scr. Marka la xusho, badhanka furan ayaa la riixayaa.
Voila, waxaan haynaa meelo kala duwan.
Haddii dhibcuhu aysan muuqan, waxaa lagama maarmaan ah in lagu soo dhawaado walxaha buuxa. Tan waxaan u qoreynaa amarka Dhaweyn, gal, Dheer, gal.
Haddii dhibco muuqan inconspicuous, amarka PTYPE waxaa toogasho ah, ka dibna image ku tilmaamay la doorto.
Kala sooc qawaaniinta ku yaal Muuqaalka iyo sawir-garaynta gudaha AutoCAD
Si loo sawiro geesoolayaasha waxay noqon doontaa isku caqli gal. kala duwanaanta aan ku qaban doonno amarka 'PLINE', ka dibna isku-duwayaasha la isku duubay iyo ugu dambeyn amarka DHOW.
Waxaan soo wici doonaa warqadan geofumadas2.scr, oo markaan fulino waxaan lahaan doonnaa raadadka sawirka. Waxaan xushay midab jaalle ah si aan u ogaado farqiga u dhexeeya geesaha cas.
Ku dhaji amarrada ku jira Excel iyo xasuus qorka ku yaal AutoCAD
Ugu dambeyntiina, waxaan mashquul ku nahay sharraxaadda qoraallada sadarka ugu horreeya oo ah sharaxaad ka bixinaysa meer kasta. Tan awgeed, waxaan ku xirxiraynaa taliska habka soo socda:
Amarkani wuxuu matalayaa:
Xaaladda qoraalka, xaaladdan waa mid caddaynaysa, tanina waa sababta warqadda J,
Qaybta dhexe ee qoraalka, waxaan dooranay Xarunta, sidaas daraadeed warqadda C
Isku-dubaridka isdhexgalka X, Y,
Kadibna cabbirka qoraalka, waxaan dooranay 3,
Xagasha wareega, kiiskan 0,
Ugu dambeyntii qoraalka aan rajeyneyno, in safka hore waa lambarka 1
Horeba loo faafiyo unugyada kale, waxay noqon doontaa sida soo socota:
Waan u yeedhay geofumadas3.cdr faylka
Waxaan dhaqaajiyay midabka cagaaran, si aan u ogaado faraqa. Marka qoraalka la fuliyo, waxaan haynaa qoraalka cabbirka la tilmaamay, oo ku yaal bartamaha isuduwaha.
Soo qaado Faylka AutoCAD loo adeegsado tusaalahan.
Maqaalka wuxuu muujinayaa sida loo dhisay shaxanka. Haddii aad u isticmaasho tusmada 'Excel', oo horeyba loogu dhisay kaliya inaad ku quudiso xogta, Waxaad halkan ka iibsan kartaa.
Post Previous" Hore Qaado heerarka sare ee wadada Google Earth
Post Next Horumarinta iyo hirgelinta kiiska BIM - Bartamaha AmeerikaNext »
Hal Jawaab "Ku dhaji dhibco, xariiqyo iyo qoraallo ka soo gudbaya Excel illaa AutoCAD"
Febraayo, 2020 at
waxaan u baahanahay caawimaad
Waa inaan sawiraa boqolaal leydi oo matalaya ka tanaasulka macdanta